Ma Hayno Xog In masar Somaliland Saldhig ka Yagleelayso”Af Hayeenka Arrimaha Dibadda Itoobiya | Marsa News
Ma Hayno Xog In masar Somaliland Saldhig ka Yagleelayso”Af Hayeenka Arrimaha Dibadda Itoobiya
Hargeisa:(Marsanews) Ethiopia ayaa Masar uga digtay inay yagleesho saldhig militari oo khatar ku ah dalkeeda, sida lagu baahiyay jariirada Daily Nation ee fadhigeedu yahay Kenya.
Afhayeenka wasaarada arrimaha dibada ee Ethiopia, Dina Mufti, ayaa jariirada Isniintii u sheegay in Masar xaq u leedahay xidhiidh ay la yeelato wadan gobolka ah, laakiin wuxuu xusay in cilaaqaadkaas uuna carqalad ku noqon dal kale. Mufti ayaa tibaaxay in haddii ujeedada Masar sidaas tahay ay lid ku tahay nabada caalamka.
Afhayeenku masoo qaadin booqashadii wafdigii Masar ee Somaliland, laakiin waxaa iska muuqata in ujeedada doodu salka ku hayso booqashadaas. Somaliland ayaa horay u sheegtay in wafdiga Masar lagala xaajooday arrimo la xidhiidha ganacsiga iyo maalgashiga, balse waxaa jira tuhun ah inla soo qaaday iskaashi dhanka ciidamada ah. Warbixinta Daily Nation ayaa lagu sheegay in labada dhan ku heshiiyeen in ergooyin la is dhaafsado.
Mufti ayaa carrabka ku dhuftay in dalkiisu xidhiidh wacan la leeyahay wadamada dariska ah oo Somaliland kamid tahay. Afhayeenka ayaa diiday in booqashadii wafdigii wasiirka maaliyada ee Ethiopia, ku gaadhay Hargeysa, ku lug lahayd arrintan. Wuxuu intaa ku daray, in Axmad Shide iyo Somaliland ka xaajoodeen sidii loo adkayn lahaa xidhiidhka labada dhinac.
Ethiopia iyo Somaliland ayaa leh iskaashi dhanka amaanka iyo ganacsiga ah. Waxa socda dhismaha wado laami ah oo isku xidha Berbera iyo Wajaale oo ku taal xadka. Ethiopia ayaa saami ku leh maalgashiga shirkad laga leeyahay Imaaradku ku baaladhinayso adeega dakada Berbera. Waxaase jira tuhun maamulka Soomaliland ka qabo xidhiidhka dhow ee ra’isulwasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha xukuumada federalka ah ee Somalia.
Xukuumada Qaahira ayaa doonaysa inay Ethiopia ku cadaadiso heshiis loo dhan yahay oo laga gaadho ismari-waaga muranka biyo-xidheenka Nile ee Ethiopia. Waxaa jira tuhun ah in Masar dadaal xoog leh galinayso inay saldhig militari ku yeealato wadamada dariska la ah Ethiopia. Koonfurta Suudan ayaa bilo kahor Friday xogo sheegayay in Masar saldhig ka samaysanayso dalkeeda.
Masar ayaa miisamaysa talaabooyinka ay qaadi karto haddii lagu guuldaraysto dhax-dhaxaadinta Midowga Afrika, balse dood adag ayaa wali ka jirta sida Qaahira u qaadi lahayd weerar militari iyo natiijada ka dhalan karta.